▷ Ịga nke ọma n'Ahụhụ: Ọdịmma nke Sistemụ ịkwụ ụgwọ Apple - 【 LaComparación 】 2022
Amazon Prime Video (Video on Demand); Freddie Highmore, Robin Williams, Terrence Howard (Actors)
Ndị ọchụnta ego niile na-anabata na mgbe ụfọdụ, ha ga-eloda ndakpọ olileanya ma jikere maka mgbanwe a na-apụghị izere ezere, nke yiri ka ọ bụ ihe Apple na-akwado maka ịkwụ ụgwọ App Store. Nke ahụ nwekwara ike ịkpalite ohere ọhụrụ ka ọ dị.
1 Mepee ịkwụ ụgwọ ụlọ ahịa ngwa
2 Ikpe ule: South Korea
3 Kedu ihe Apple ga-eme ọzọ iji chebe ọrụ App Store?
4 Egwuregwu ogologo? Ọ bụ ihe niile gbasara ego
Mepee ịkwụ ụgwọ ụlọ ahịa ngwa
Apple nọ na nrụgide dị ukwuu ma a bịa n'ịkwụ ụgwọ na Ụlọ Ahịa Ngwa. O meela ọtụtụ arụmụka ihe kpatara usoro ịkwụ ụgwọ nke ya ga-eji bụrụ iwu maka ịre ahịa App Store, mana ụlọikpe dị na South Korea na United States ekwetaghị. Ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-eche nyocha nchịkwa ihu n'ọtụtụ mba.
Iji mee ka ndị mmepe nwee obi ụtọ, Apple na-aga n'ihu na-atụgharị ka usoro ya si arụ ọrụ, gụnyere iwetu ọrụ site na 30% ruo 15% maka ọtụtụ ndị mmepe na-ekwe nkwa ikwe ka ndị mmepe chọta ụzọ ndị ọzọ ịkwụ ụgwọ. Mana ọchịchọ maka nkwado nke usoro ịkwụ ụgwọ mpụga ka dị.
Isi, ndị asọmpi, ndị mmepe na ndị nyocha chọrọ ka ụlọ ọrụ ahụ kwe ka ndị ahịa zụta ngwaahịa dijitalụ site na iji usoro ịkwụ ụgwọ na-abụghị nke ha.
Ikpe ule: South Korea
Na South Korea, iwu chọrọ ugbu a ikpo okwu App Store kwado ọtụtụ usoro ịkwụ ụgwọ. Na nkwupụta na nso nso a, Apple kwuru na ọ ga-agbaso iwu ahụ, na-ewepụta nkwupụta na-ekwu:
"Apple nwere nkwanye ùgwù dị elu maka iwu Korea yana akụkọ siri ike nke ịrụ ọrụ na ndị mmepe ngwa ngwa nke obodo. Anyị na-atụ anya iso KCC na obodo ndị nrụpụta anyị rụọ ọrụ na ngwọta na-abara ndị ọrụ Korea anyị uru.
"A ga na-eduzi ọrụ anyị mgbe niile site n'ime ka App Store bụrụ ebe nchekwa na ntụkwasị obi maka ndị ọrụ anyị ibudata ngwa ndị ha hụrụ n'anya."
Apple akọwabeghị otu ma ọ bụ mgbe ọ ga-akwado usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ, mana o doro anya na ọ tinyela atụmatụ na ndị na-achịkwa South Korea.
Akụkọ ntanetị na-egosi na n'okpuru atụmatụ ndị a, ụlọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ ọrụ na ahịa ndị a. A kwadoro ọrụ a site n'eziokwu ahụ na-enweghị mgbagha na ọ bụrụ na Apple emeghị ka ọ rụọ ọrụ ma zụlite usoro ya, a gaghị enwe ohere azụmahịa dị na mbụ.
Ọbụna ụlọ ahịa ịzụ ahịa na-ana ụdị maka ebe nchekwa dịka otu echiche ahụ si dị. Otu nnukwu ajụjụ ka dị ka ọ na-adịbu: kedu ọkwa ụgwọ a na-anabata. Ajụjụ na-esote ga-abụ iji hụ na a na-akwụ ụgwọ otu ọnụego na nyiwe niile.
Kedu ihe Apple ga-eme ọzọ iji chebe ọrụ App Store?
Apple ga-achọ ijide n'aka na, n'inye nhọrọ, ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ usoro ịkwụ ụgwọ nke onwe ha mgbe ọ bụla ọzọ. N'okwu a, atụmatụ kachasị pụta ìhè bụ ịnye usoro ịkwụ ụgwọ nke dị nnọọ mma karịa nhọrọ niile.
Ihe ịma aka nke abụọ bụ na site n'ime nke a, a pụghị ịhụ ụlọ ọrụ ahụ ka ọ na-eji njikwa software na ikpo okwu na-eme ka usoro ịkwụ ụgwọ ya nwee uru dị ukwuu, n'ihi na nke a ga-abụ mgbochi asọmpi.
Agbanyeghị, iwu asọmpi na-aga n'ụzọ abụọ, nke pụtakwara na sistemụ ndị ọzọ ga-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ ihe doro anya dịka ihe niile Apple na-enye.
A sị ka e kwuwe, nanị ịnye ọrụ ka mma dabere n'otu ohere ahụ dịnụ bụ kpọmkwem uru ahịa efu nke ndị asọmpi na-ekwu na ha chọrọ. Usoro ịkwụ ụgwọ Apple na-aghọ naanị ngwaahịa ịkwụ ụgwọ Apple.
Enwere ike Epic gosi na ọ jụrụ ikwe ka ịkwụ ụgwọ Apple nhọrọ na ụlọ ahịa nke ya? Ọ bụ ihe doro anya nwere ike ịpụta na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na njikwa Apple weere ya karịa.
Egwuregwu ogologo? Ọ bụ ihe niile gbasara ego
Apple kwupụtara ụnyaahụ na ndị mmepe ya ewerela 260 ijeri euro site na ire ahịa App Store kemgbe ụlọ ahịa ahụ malitere na 2008. Ọnụ ego a buru ibu sochiri nnukwu afọ nke ire ere na App Store. ọ gbagoro €60bn n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga.
(Nke a na-eburu n'uche mgbanwe Apple mere na Commission Developers n'oge ahụ.)
Ya mere, n'oge a, ndị mmepe na-enweta ihe dị ka ijeri euro 5 kwa ọnwa, nke na-egosi n'ezie na ha agaghị enwe mmasị na mgbanwe ndị nwere ike imebi gburugburu ebe a bara uru.
Ọ bụ ezie na e nwere ihe mgbagwoju anya na Apple na-amanye ka ya na ndị ọzọ na-asọrịta mpi n'elu ikpo okwu nke ya, a na-egbutu ihe mgbagwoju anya ahụ ugboro abụọ ma ọ bụrụ na ọ họrọ ịsọ mpi n'ebe ọzọ. A sị ka e kwuwe, ebe ọ bụ na a na-ewere ụfọdụ usoro ịkwụ ụgwọ dị ala karịa ndị ọzọ, Apple nwere ike ịtụgharị nnwere onwe nke usoro ịkwụ ụgwọ site na Ụlọ Ahịa App ka ọ bụrụ ohere dị ukwuu iji nweta nnukwu ahịa karịa site na ịnyefe usoro nke ya na nyiwe asọmpi.
Soro m na Twitter ma ọ bụ sonye m na AppleHolic's mmanya & grill na Apple Discusions otu na MeWe.
Nwebiisinka © 2022 IDG Communications, Inc.
Ntuziaka dị mkpa maka ịbanye na iCloud
Ụfọdụ ụlọ ọrụ teknụzụ kụrụ bọtịnụ nkwụsịtụ mgbe ha na-ewe ọrụ
Mmetụta ndị ahịa na-amalite site na ilekọta nsogbu ndị ahịa
Webụsaịtị kacha mma ịzụta ngwaahịa n'ịntanetị
Kedu ihe dị mma gbasara "enyo ntụgharị asụsụ" nke Google?
Pọdkastị: Okwu iwepụta ngwaike nwere ike gbanwee atụmatụ WWDC nke Apple?